ဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင်၏ အောင်မြင်မှု့ နောက်ကွယ်က လျို့ဝှက်ချက်တစ်ချို့ စတင်ပေါက်ကြား – Alanzayar
ဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင်၏ အောင်မြင်မှု့ နောက်ကွယ်က လျို့ဝှက်ချက်တစ်ချို့ စတင်ပေါက်ကြား
အဲ့လို , ရိုးသားပါတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေ , ဖောက်ပြန်ရင် ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ဆိုတာ လက်ခံလား ? ကြည့် တော့ဖြင့် , အေးတိအေးစက်နဲ့ ကုတ်ကမြင်းး , လူရှေ့တမျိုး ကွယ်ရာတမျိုးး နှစ်မျိုး ,သီချင်းဆို မနေနဲ့ , သရုပ်ဆောင် လုပ်စားပါလားး ?အောင်မြင် သူတိုင်းရဲ့ , နောက်ကွယ်မှာ , သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ , ကောင်းတဲ့ , လျို့ဝှက်ချက် တစ်ခု့ , ကိုယ်စီကိုယ်စီ , ရှိကြတယ်
သူတို့ အောင်မြင်လာရခြင်းရဲ့ , အဓိက အချက်ပေါ့ , , ဉုံဖွ့ ဟတ်ချလောင်း ဆိုပြီးဘယ်သူမှ အောင်မြင်လာတာ , မဟုတ်ပါဘူးး , ဘယ်အရာမှတော့ လွယ် လွယ်နဲ့ မရတတ်ပါဘူး အဲ့အရာအတွက် တန်ရာ တန်ကြေးတစ်ခု့တော့ ပေးရစမြဲပါအဲ့ဒီလိုပါပဲ အဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင် , မအောင်မြင်ခင်က ,
သူချန်လှပ်ထားခဲ့တဲ့ , လျို့ဝှက်တစ်ခု့ ရှိနေပါတယ်သူပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ , ဘဝပျက်မတတ် ပေးဆပ်မှု့ကြီးပေါ့အဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင်က , သာမန်လူတန်းစား ဘဝကကြီးပြင်းတယ် , ရိူးသားတယ် , ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းတယ် ,
သူဝါသနာပါတဲ့ အရာပေါ်မှာ လုံးဝရူးသွပ်တယ်မဆုပ်မနစ် ဇွဲမလျော့ဘဲ ကြိုးစားခဲ့လို့ , နမည်ကျော် မြန်မာIDOL ရဲ့ , Winner တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တာ ပါ , ယခု့တစ်ခါမှာလည်းချစ်သူများ နေ့မှာ မိတ်ကပ်လင်းလင်း နဲ့ အတူ ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးထံ မှာစိတ်တူကိုယ်တူ လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ ကပ်လှူနေတဲ့crd
ဆိုတျော ဖွိုးမွတျအောငျ၏ အောငျမွငျမှု့ နောကျကှယျက လြို့ဝှကျခကျြတဈခြို့ စတငျပေါကျကွား
အဲ့လို , ရိုးသားပါတယျ ဆိုတဲ့ သူတှေ , ဖောကျပွနျရငျ ပိုကွောကျဖို့ကောငျးတယျ ဆိုတာ လကျခံလား ? ကွညျ့ တော့ဖွငျ့ , အေးတိအေးစကျနဲ့ ကုတျကမွငျးး , လူရှတေ့မြိုး ကှယျရာတမြိုးး နှဈမြိုး ,သီခငျြးဆို မနနေဲ့ , သရုပျဆောငျ လုပျစားပါလားး ?အောငျမွငျ သူတိုငျးရဲ့ , နောကျကှယျမှာ , သိပျစိတျဝငျစားဖို့ , ကောငျးတဲ့ , လြို့ဝှကျခကျြ တဈခု့ , ကိုယျစီကိုယျစီ , ရှိကွတယျ
သူတို့ အောငျမွငျလာရခွငျးရဲ့ , အဓိက အခကျြပေါ့ , , ဉုံဖှ့ ဟတျခလြောငျး ဆိုပွီးဘယျသူမှ အောငျမွငျလာတာ , မဟုတျပါဘူးး , ဘယျအရာမှတော့ လှယျ လှယျနဲ့ မရတတျပါဘူး အဲ့အရာအတှကျ တနျရာ တနျကွေးတဈခု့တော့ ပေးရစမွဲပါအဲ့ဒီလိုပါပဲ အဆိုတျော ဖွိုးမွတျအောငျ , မအောငျမွငျခငျက ,
သူခနျြလှပျထားခဲ့တဲ့ , လြို့ဝှကျတဈခု့ ရှိနပေါတယျသူပေးဆပျခဲ့ရတဲ့ , ဘဝပကျြမတတျ ပေးဆပျမှု့ကွီးပေါ့အဆိုတျော ဖွိုးမွတျအောငျက , သာမနျလူတနျးစား ဘဝကကွီးပွငျးတယျ , ရိူးသားတယျ , ဘာသာတရား ကိုငျးရှိုငျးတယျ ,
သူဝါသနာပါတဲ့ အရာပျေါမှာ လုံးဝရူးသှပျတယျမဆုပျမနဈ ဇှဲမလြော့ဘဲ ကွိုးစားခဲ့လို့ , နမညျကြျော မွနျမာIDOL ရဲ့ , Winner တဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့တာ ပါ , ယခု့တဈခါမှာလညျးခဈြသူမြား နမှေ့ာ မိတျကပျလငျးလငျး နဲ့ အတူ ဆရာတျောကွီး တဈပါးထံ မှာစိတျတူကိုယျတူ လှူဖှယျပစ်စညျးတို့ ကပျလှူနတေဲ့crd
Previous Article ယောကျြားတှစှေဲတဲ့မြှော့!
Next Article အတန်းထဲက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်ကြောင့် မိသားစုတစ်စုလုံးရင်နာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နောင်တ